Ahịa ọkachamara gbasara ihe omumu Video Marketing Atụmatụ ọ bụla SEO onye mmeri ga-ama
N'ịntanetị, njikarịcha search engine (SEO) dị mkpa maka ọtụtụ ndị mmadụchọsiri ike ime ka oru ha buru ogologo oge. Ịchọpụta ọdịnaya dị mfe n'ihi na ọ gụnyere atụmatụ ndị a maara. Otú ọ dị, ụfọdụ ahịa ahịa dijitalụụlọ ọrụ na-ahụ usoro a na-agba ọsọ karịsịa mgbe ha amaghị ihe ha ga-eme - bar stool patio chairs. Nyocha njirimara search engines dị mkpa maka ọ bụla n'Ịntanetọdịnaya. Kemgbe afọ 2006, Google zụtara YouTube na kemgbe ahụ, iji SEO na obere vidiyo dị nnọọ ka ọ dị mkpa dịka ọ bụla ọdịnaya intaneti ọ bụla.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-achọta iji vidiyo na ụzọ dị iche iche. Dị ka ọmụmaatụ, ọtụtụ FAQs nankuzi chọrọ ụzọ nke video vidiyo ọma. N'ịmara mkpa SEO maka vidiyo, onye nwere ike ịjụ otú ị ga-esi tinye ya n'ọrụ.
Andrew Dyhan, Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, akọwapụtara ọtụtụ ndụmọdụ bara uru nke nwere ike ime ka vidiyo na-enye gị ọkwa dị elu:
Ọ dị mkpa ịgụnye isiokwu n'ime akwụkwọ akụkọ nke ozi gị. A vidiyokwesịrị ịrụ ọrụ dị ka isiokwu na blog post. Vidio ndị ahụ kwesịrị ịbụ ihe zuru ezu, ihe ọmụma ma dị mkpirikpi. Ọtụtụ nnyocha na-egosi nandị na-emekarị ọrụ na-ewe ihe dị ka nkeji 2 na vidiyo. Debe ogologo oge vidiyo gị: ihe dị ka nkeji ise. Ihe omimi na-eme ka mkpuchi elu uwa di elunke ọdịnaya gị yana ịnye usoro ihe ọmụma maka ndị ọrụ gị na-arụ ọrụ iji pịa ma chọta ọdịnaya dị mkpa..Nweta videombak n'elu nyiwe dika YouTube. Ntugharị Google nwere ike ịchọta njikọ ndị kachasị ọnụ nke mesịrị ghọọ njirisi maka ogo ọtụtụnke weebụsaịtị.
Nzube nke vidiyo.
Ọhụụ, ebumnuche, na uru nke vidiyo SEO atụmatụ bụ isi ihe natụlee. Onye nwere ike ịmepụta mgbasa ozi vidiyo dị irè na ọrụ siri ike. Otú ọ dị, ihe mgbaru ọsọ nke vidio nwere mmetụta dị ukwuuna mkpa ndị mmadụ na-eji ha. Dị ka ọmụmaatụ, vidio a maka maka ịmepụta pụrụ ịbụ ihe ọmụma na ịgụnye zụta ugbu a usoro. Otú ọ dị, ụlọ ọrụ mkpuchi ụlọ ọrụ mkpuchi maka ihe ndị nkụzi nwere ike ọ gaghị enwe ha.Kama nke ahụ, ha na-etinye aka na ntinye isiokwu.
Mmetụta na ime mgbanwe.
Mgbe mmadụ na-achọ video vidio, ndị na-ekiri ihe bụ otu n'ime ihe kachasị ndị mmadụtụlee. Vidiyo ndị na-eduga ma ọ bụ ndị nke nwere ike ịmekọrịta mmekọrịta bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma maka ịnweta ngosi nke echiche.Ọtụtụ usoro nwere ike ime ka vidiyo mezuo ọkwa a. Dịka ọmụmaatụ, ịbanye na nhazi nke auditory. Onye nwere ike itinyendepụta okwu, nkọwa na nkọwa nkọwa na vidiyo. Usoro a na - akpali ma ọhụụ anya na nke nyochana-abawanye mkpa.
Na SEO taa, ihe ndị e kere eke na ịzụ ahịa vidio bụ ụfọdụ usoro nkeenwe mmetụta dị ịrịba ama na ọtụtụ ụzọ SEO. Ndị ọrụ mụ na ndị enyi m na-akwado iji akọ a eme ihe karịsịa maka ndị na-ege ntị nkena-ezo aka na vidiyo maka nkọwa. Ọ bụ ezie na echiche abụọ a nwere ike iyi ihe dị iche, ha bụ ma ahịa ahịa dijitalụ ma nweeikike nke ịba ụba. Vidio dị mma n'ịkọwa yana ịkwado ndị na-ege ntị ebe ị ga-arụakpo oku na-eme ihe na ebe nrụọrụ weebụ gi. N'ihi ya, ahịa vidiyo nwere ike ịbụ ihe ngwọta maka ọrụ ịkwado ebe nrụọrụ weebụ gị, karịsịa naengines ọchụchọ.